I-china abakhiqizi be-MILK BOTTLE MACHINE nabaphakeli | Tonva
Le modeli ifakiwe ngale ndlela elandelayo: i-multi die head, isiteshi esiphindwe kabili nokukhiqizwa okuphezulu. Ibhodlela ukujiya komgodi ngamunye kwenziwa noma kuklanywa isikhungo sokondla ikhanda lokufa, elicutshungulwa isikhungo somshini we-CNC. I-2.Machine isebenzisa umkhiqizo ongenisiwe wezakhi ze-hydraulic futhi isebenzisa i-valve elingana kabili ukulawula isivinini sokugeleza nengcindezi yesifunda samafutha esingalawulwa naku-inthanethi. Ukuhamba kwalokhu okungenhla kuzinzile futhi kubushelelezi. I-3.MOOG 100 Points Parison Controller System ingamukelwa ukuze ithuthukise ikhwalithi yomkhiqizo. Le modeli ingathuthukiselwa ku- "Uhlobo lwe-Hybrid", ingxenye yokuhamba yenqola yakhelwe nge-servo motor ukufeza umsindo, ukusebenza okulula, isikhundla esiqondile kanye ne-swift center-focus on mold. 5.Machine kungenziwa yakhelwe ukusebenza irobhothi ingalo, elihambayo, ukuvuza umhloli, e-isikhunta ilebula, umshini emaphaketheni, njll njengoba ngamunye imfuneko sakho.
Ukucaciswa okuyisisekelo Impahla eluhlaza
Uhlelo Lokukhipha Ububanzi besikulufu
Kufa Inhloko Izindawo zokushisa
Clamping System Clamping ibanga
Ukusetshenziswa kwamandla Ukucindezela komoya
Ukusetshenziswa kwamanzi okupholisa
Le modeli ifakiwe ngale ndlela elandelayo: i-multi die head, isiteshi esiphindwe kabili nokukhiqizwa okuphezulu. Ibhodlela ukujiya komgodi ngamunye kwenziwa noma kuklanywa isikhungo sokondla ikhanda lokufa, elicutshungulwa isikhungo somshini we-CNC.
I-2.Machine isebenzisa umkhiqizo ongenisiwe wezakhi ze-hydraulic futhi isebenzisa i-valve elingana kabili ukulawula isivinini sokugeleza nengcindezi yesifunda samafutha esingalawulwa naku-inthanethi. Ukuhamba kwalokhu okungenhla kuzinzile futhi kubushelelezi.
I-3.MOOG 100 Points Parison Controller System ingamukelwa ukuze ithuthukise ikhwalithi yomkhiqizo.
5.Machine kungenziwa yakhelwe ukusebenza irobhothi ingalo, elihambayo, ukuvuza umhloli, e-isikhunta ilebula, umshini emaphaketheni, njll njengoba ngamunye imfuneko sakho.
Langaphambilini Lishaye Moulding MACHINE TVA 1000L- 10000L
Olandelayo: I-PESTICIDE BOTTLE MACHINE